समाज Archives | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
जिल्ला भित्रिने मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको छेडाबजार जिल्लाका सबै ठाउँमा जाने व्यस्त बजार पनि हो । जाजरकोट र सुर्खेत जिल्लाको सिमानामा रहेको शिवालय गाउँपालिका -१स्थित दैनिक चहलपलह हुने छेडाबजार छिन्चु -जाजरकोट – डोल्पा सडक खण्डको चर्चित ठाउँ भए पनि यहाँ खानेपानीको अभाब हुँदा स्थानीयवासी वर्षाैंदेखि भेरी नदीको फोहर पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् । जिल्लाको ठूलो व्यापारिक नाका भएर पनि खानेपानीको अभावमा भेरी नदीको भर पर्नुपर्दा स्थानीयवासी हैरान भएको स्थानीय व्यापारी जगत बुढाले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि चासो नदिएकाले अव हामीले सङ्घीय सरकारमा कुरा पुर्‍याएका…
July 23, 2019 July 23, 2019 Nepal E News
सूचना प्रविधि विद्येयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सजायको कडा प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले फोन प्रयोगकर्ताका लागि पनि उस्तै प्रावधान राखेर कानुन मस्यौदा तयार पारेको छ । दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट कसैलाई गाली, धम्की वा दुख दिए १५ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म जेल हुने प्रस्ताव गर्दै कानुनको मस्यौदा बनाइएको हो । फोन गरेर वा एसएमएसमार्फत अरुलाई गाली गर्ने वा धम्क्याउनेलाई लक्षित गर्दै मस्यौदामा कडा सजायको प्रावधान राखिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवाका माध्यमबाट गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुख…
खेलकुद, समाजफोनबाट गाली गर्नेलाई १ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने !Leaveacomment
February 7, 2019 Nepal E News
माघ २४, काठमाडौं । यस्तो गाउँ जहाँ अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन भ्रष्टाचार शून्य गाउँ सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर यो सत्य हो। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमी भ्रष्टाचार शून्य गाउँ रहेको छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता अपनाएपछि यहाँ कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्दा स्थानी उपभोक्ता समितिमा बस्न मान्दैनन्। तर, अन्य ठाउँमा भने उपभोक्ता समितिमा बस्न तँछाडमछाड गर्ने मात्र होइन, राजनीतिक शक्तिसमेत प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता अपनाएको लिमीमा भने उपभोक्ता समितिमा बस्न नमानेपछि स्थानीयलाई घरको पालो लगाएर अनिवार्य रूपमा समितिमा बसाल्ने व्यवस्था गरिएको स्थानीय पाल्जोर तामाङले बताए। विकास निर्माणका कुनै…
समाजयस्तो गाउँ जहाँ अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचार भएको छैनLeaveacomment
हर्न बजाउने झण्डै चार सय चालक कारवाहीमा
पौष ३०, दाङ । हर्न बजाउने झण्डै चार सय चालक कारवाहीमा तुलसीपुर उमहानगरपालिकाको तुलसीपुर बजारलाई हर्न निषेध घोषणा गरेको करीब डेढ महीनाको अवधिमा सो पालन नगर्ने ३७९ चालक कारवाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक चन्द्रबहादुर केसीका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकलका चालक छन् । त्यस्तै बस, जिप, कार, ट्र्याक्टर, ट्रक, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधनका चालक रहेका छन् । सबै चालकलाई प्रहरीले सडकमा नै कारवाही गरेको हो । तीमध्ये १८९ जनाबाट जरिवानास्वरुप रु ९८ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । एक सय ९० जना चालकले…
समाचार, समाजहर्न बजाउने झण्डै चार सय चालक कारवाहीमाLeaveacomment
हाइसको ठक्करबाट युवकको मृत्यु
पौष ३०, टिकापुर । हाइसको ठक्करबाट युवकको मृत्यु कैलालीको मध्यवर्ती घोडाघोडी नगरपालिका वडा न ५ डोकेबजारमा मोटरसाइकल र हाइस एकआपसमा ठोक्किँदा एक युवकको मृत्यु भएको छ। आइतबार राति आठ बजेतिर पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको बा २ ख ४०१४ नम्बरको हाइसले विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको से ५ प ७५५३ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक बौनियाका १९ वर्षका राजन बुढाको मृत्यु भएको हो। ईलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रमुख यक्ष राज जोशीकाअनुसार दुर्घटनामा घाइते बुढाको घोडाघोडी अस्पताल सुखडमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकलमा सवार बौनियाकै १९ वर्षका उमेश ताम्राकारको उपचार भइरहेको प्रहरीले…
समाचार, समाजहाइसको ठक्करबाट युवकको मृत्युLeaveacomment
ड्रोन उडान कार्यविधि झन्झटिलो, आफुखुसी उडाउनेहरु प्रहरी फन्दामा
पौष ३०, काठमाडौं । ड्रोन उडान कार्यविधि झन्झटिलो, आफुखुसी उडाउनेहरु प्रहरी फन्दामा भक्तपुरको ठिमी र ललितपुरको लगनखेलबाट केही दिनअघि प्रहरीले ड्रोन नियन्त्रणमा लियो । ती ड्रोन उडाउने व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा छन् भने ड्रोन जफत गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार, पक्राउ व्यक्तिले घरमा लगाइएको पूजाको भिडियो खिच्न सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नलिई ड्रोन उडाएको बयान दिएका छन् । त्यस्तै, लगनखेलमा भने शोखका लागि छतमा बसेर अरूलाई ड्रोन उडाउन सिकाइ रहेको अबस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ड्रोन आयात गर्नुभन्दा उडाउन स्वीकृति लिन झण्झटिलो भएकाले आफूखुशी उडाइएको भनाइ ती चालकको छ…
समाजआफुखुसी उडाउनेहरु प्रहरी फन्दामा, ड्रोन उडान कार्यविधि झन्झटिलोLeaveacomment
पौष ३०, काठमाडौं । कोकमा रक्सी मिसाएर किशोरीको सामूहिक बलात्कार कोकको बोतलमा रक्सी मिसाएर दुई युवकले भद्रपुरकी एक किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। घटनामा संलग्न दुई युवकमध्ये एकजनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको टोलीले पक्राउ गरेको छ। अर्का एक फरार रहेको झापाका प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा झापा भद्रपुर नगरपालिका ४ फागुचोकका ३२ वर्षीय घरबहादुर लिम्बू र फरार भएकामा सोही ठाउँका २८ वर्षीय राजेश राजवंशी हुन्। राजवंशी भारतको सीमाना नजिकै भएकाले उतैतर्पm भागेको प्रहरी आशंका छ। उनको खोजी कार्य पनि पारिएको श्रेष्ठको भनाइ…
समाचार, समाजकोकमा रक्सी मिसाएर किशोरीको सामूहिक बलात्कारLeaveacomment
January 12, 2019 Nepal E News
काठमाडौँ — पैदलयात्रु लार्इ जेब्राक्रसमै जोखिम भएपछि सडकमा पहिलो हक कसको ? पैदलयात्रुको । संसारभर स्वीकृत मान्यता हो यो । नेपालका सडकमा भने पैदलयात्रु डराइडराइ हिँडेका र बाटो काटिरहेका भेटिन्छन् । पैदलयात्रुलाई बाटो काट्नैका लागि भनेर बनाइएका जेब्राक्रसिङमा समेत सवारी साधनले ठक्कर दिने र ज्यान लिने गरेको छ। पछिल्ला केही समयका घटना हेर्दा पैदलयात्रु जेब्रामै जोखिममा देखिन्छन्। सामाखुसी चोकमा पुस २३ सोमबार पैदलयात्रीको एउटा समूहलाई नै माइक्रोबसले ठक्कर दियो। बाटो काटिरहेकामध्ये ५५ वर्षीया सीता दाहालको मृत्यु भयो। उनको टाउकोमा चोट लागेको अल नेपाल अस्पतालका आकस्मिक कक्षका चिकित्सक अनिल सुवेदीको भनाइ…
समाचार, समाजपैदलयात्रु लार्इ जेब्राक्रसमै जोखिम भएपछिLeaveacomment
January 11, 2019 Nepal E News
काठमाडौं । चिसोले कठ्यांग्रिएर काठमाडौंमा दैनिक ६ को मृत्यु काठमाडौंमा बढेको चिसोले कठ्यांग्रिएर दैनिक ६ जनाको मृत्यु हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । मृत्यु हुनेमा विशेष गरी सडकमा बेवारिसे अवस्थाका वृद्धवृद्धा छन् । प्रहरीका अनुसार यो तथ्यांक काठमाडौं महानगरपालिका आसपास सडकपेटीमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका वृद्धवृद्धाको मात्रै हो । यस्ता वृद्धवृद्धा काठमाडौंको सडकपेटीमा दुई सयको हाराहारीमा रहेको प्रहरीको दाबी छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
समाजचिसोले कठ्यांग्रिएर काठमाडौंमा दैनिक ६ को मृत्युLeaveacomment
सीमा क्षेत्रमा नक्कली डाक्टर, मेडिकलहरु पनि दर्ता गरिएका छैनन् !
विरगञ्ज । सीमा क्षेत्रमा नक्कली डाक्टर, मेडिकलहरु पनि दर्ता गरिएका छैनन् ! तराईका जिल्लामा अधिकांश औषधि पसल एवं मेडिकल क्लिनिक अबैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको छन् । बारा, पर्सा जिल्लाका अशिकांश औषधि पसल सञ्चालकले अनुमति लिएको पाइदैन । जिल्लाका सिम्रनगढ, च्युटाहा, हर्नैया, बरियार्पुर लगायतका स्थानमा सयांै यस्ता मेडिकल सञ्चालनमा छन् । यस्ता कयौं मेडिकलहरुमा नक्कली डाक्टर समेतले उपचार गरिरहेका छन् । मेडिकल सञ्चाल नक्कली डाक्टरहरु राखेको आफै स्वीकार्छन । पाँच कक्षा को समेत प्रमाणपत्र नभएका ब्यक्ति डाक्टर भन्दै बिरामी जाँच्ने गरेको पाइएको छ । हर्नैयाको एक मेडिकलमा बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु…
समाचार, समाजमेडिकलहरु पनि दर्ता गरिएका छैनन् !, सीमा क्षेत्रमा नक्कली डाक्टरLeaveacomment